ဂျူဗင်တပ် အသင်းသို့ ငါးနှစ်စာချုပ်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန် အမ်မရီကန် အပြီးသတ် သဘောတူညီမှု ရရှိ? - Yangon Media Group
လီဗာပူးအသင်း ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ အမ်မရီကန်သည် အသင်းမှကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် သက်တမ်းတိုးစာချုပ်အား ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက် စီးရီးအေချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်အသင်းသို့ ငါးနှစ်စာချုပ်ဖြင့်ပြောင်း ရွှေ့ရန် အပြီးသတ်သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အီတလီမီဒီယာများ၏ အခိုင်အမာ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့် အမ်မရီကန်သည် အသင်းမှကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် သက်တမ်းတိုးစာချုပ်အတွက် ဆွေးနွေးမှုအချို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လစာနှင့်ခံစားခွင့်ပိုင်းတွင် ညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အသင်းမှ ထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်အသင်းနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိသတင်းထွက်ပေါ်မှုများအရ စာချုပ်သက် တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့တော့မည့် အမ်မရီကန်သည် ရီးရဲလ်အသင်းနှင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အား ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ဝခြင်းကြောင့် ပွဲထွက်ပါဝင်ကစားရန် မသေချာသေးသော်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ် ပြီးဆုံး မှသာ ၎င်း၏အနာဂတ်အခြေအနေအား အတိအကျသိရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့ ကုသိုလ်တော် ဘုရားအနီး 'မြန်မာ့သရက် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် 'သရက်သီး ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျ??